सर्वश्रेष्ठ X570 मदरबोर्ड्स (डिसेम्बर २०२०) - समीक्षाको साथ खरीद गाईड - गेमि।
तपाइँ तपाइँको अन्तिम गेमि PC पीसी निर्माण गर्न तयार हुनुहुन्छ, र तपाइँलाई कुन कन्फिगरेसन चाहिन्छ भनेर तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ, तर तपाइँ कुन मदरबोर्डको साथ अडिनुभयो, ठीक छ?
ठीक छ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग तपाईंको समाधान छ। हामीले एउटा बृहत पोष्ट तयार गरेका छौं जुन तपाईंलाई बजारमा प्रस्तुत हुने उत्तम X570 मदरबोर्डहरूको बारेमा सबै ज्ञान दिन्छ। यी सबै मदरबोर्डहरू एक अवरोही तरिकामा उल्लेख गरिएको छ। कुन पोष्टर तपाईले किन्नुपर्दछ भन्ने उत्तम पोष्ट कुन हो भनेर थाहा पाउन यो पोस्ट पढ्नुहोस्।
PS5 vs Xbox श्रृंखला X - कुन गेम्स कन्सोल उत्तम छ?
२०२० मा प्रयोग गर्न उत्तम X570 मदरबोर्डको सूची:
धेरै मदरबोर्डहरू समीक्षा गरे पछि हामीले केहि राम्रा X570 मदरबोर्डहरूलाई सूचीकृत गर्‍यौं जुन तपाईंले आफ्नो आँखामा राख्नु पर्छ। त्यसैले यहाँ उत्तम X570 मदरबोर्डको सूची छ:
१. गीगाबाइट X570 अरोस एलिट
Gigabyte X570 AORUS एलिट मदरबोर्ड एक बजेट र X570 प्लेटफर्ममा आउँछ। यो PCI-e to.० बाट PCIe N.० N.2 समर्थन स्लटहरू, एक एकीकृत IO शील्ड, VRM कभर ठूलो तातो डूब, र फ्रन्ट प्यानल USB टाइप-सी समर्थन सहित सबै मूल कुराको साथ आउँदछ। Ryzen 2000 र Ryzen 3000 श्रृंखला प्रोसेसर Gigabyte X570 AORUS एलिट दुवैको समर्थन गर्दै Gigabyte X570 उत्पादन स्ट्याकमा दोस्रो बोर्ड हो।
एलीटले प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्माण गर्नका लागि राम्रो सन्तुलित प्लेटफर्म दिने दाबी गरेको छ, अप-टु-डेट कनेक्टिविटी प्रदान गर्दै र एक पूर्ण पावर डेलिभरी क्षेत्र जुन सबै राइजेन full००० प्रक्रियाहरू ड्राईभ गर्न सक्षम छन्। गीगाबाइट एक्स 7070० अरोस एलिट उपस्थिति केहि अलि कालो पीसीबीको साथ केही भिन्न देखिन्छ र केहि चिपसेट तातो सिink्क र अडियो क्षेत्र वरिपरि स्टिन्सिलिंग। बाहिर जानुभयो, हामी बायाँ VRM heatsink संग एकीकृत पछाडिको I / O प्लेटहरू कफनको साथ AORUS ब्रान्डि see देख्न सक्छौं।
पोर्टमा सबै गर्मी डूबले ब्रश गरिएको एल्युमिनियम फिनिश गर्दछ, चिपसेट गर्मी सिंकले सानो फ्यानलाई समर्थन गर्दछ साथसाथै एओरस फाल्कन शीर्षमा गर्वसाथ बसिरहेको छ। डीआईएमएम र पीसीआई स्लटहरू बोर्डसँग मिल्दछ भने प्राथमिक धातुले ढाकिएको पीसीआई स्लटहरू, जुन गीगाबाइट्सले अक्टा टिकाऊ पीसीआई-ई आर्मर कल गर्दछ। आठ अन्य पिन एपीएस २ pin पिन एटीएक्स र सटा पोर्ट सहित सबै अन्य कनेक्टरहरू सबै कालो छन्। RGB लाइटले बोर्डमा देखा पर्छ, जुन VRM heatsink को I / O कफन मुनि फेला पर्दछ, र तल बायाँ तिरको रेखा लाई बोर्डको बाँकीबाट अडियो बिट्स छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ।
हामी overclocking प्राप्त गर्न उत्साहित थियौं र यो सस्तो मदरबोर्डले के गर्न सक्षम भयो भनेर पत्ता लगाउन उत्साहित थियौं। केहि चिह्नपछिको पछि, RX 570 AORUS एलिटले Ryzen को73700 X मा 4.1 GHz १.32२ वोल्टमा बाहिर निकाल्न सक्षम भयो; यस विन्दु बाहिर केहि पनि AIDA64 तनाव परीक्षण को एक छिटो रोक्नुहोस्।
पोर्टमा S SATA पोर्ट, डुअल PCI-e X.० X M M.2 स्लट, एक heatsink साथ एक, र USB पोर्ट को एक राम्रो संख्या, USB 3..१ जेन दुई पोर्ट र पछाडि र अगाडी प्यानल सहित। गीगाबाइट X570 AORUS एलिट मार्केटमा एक असाधारण X570 बोर्ड हो।
२.असुस एएम T टीयूएफ गेमि X एक्स 7070० प्लस वाईफाई
Asus TUF गेमि mother मदरबोर्ड X570 प्लेटफार्ममा उपलब्ध सबैभन्दा कम खर्चिलो बोर्डहरू मध्ये एक हो तर एक USB प्रकार-सी पोर्ट, वाइफाइ र आरजीबी एलईडी रोशनी समावेश गर्न प्रबन्ध गर्दछ चिपसेट heatsink नजिक। Asus TUF लाइनअप अल्ट्रा-रबस्ट भारी शील्डि fromबाट परिवर्तन भएको छ जुन यो विगतमा परिचित थियो र पीसीआईआई र डिआईएमएम स्लट जस्ता व्यक्तिगत भागहरूको संरक्षणको साथ गेमि--केन्द्रित बोर्डहरूतिर बढेको छ; यी परिवर्तनहरूले Asus AM4 TUF गेमि X X570-Plus WIFI ASUS X570 उत्पादन स्ट्याकमा दोस्रो सबैभन्दा कम महँगो बोर्ड बनाएको छ।
यस मदरबोर्डमा ओभरक्लाकिले कोरमा १.3 भोल्ट प्रयोग गरेर 2.२GHz प्राप्त गर्‍यो। एकै साथ, घडीको गति X570 AORUS एलिट द्वारा मात्र प्राप्त गरेको भन्दा अलि बढी छ। यो फैलिएको स्पेक्ट्रम र फ्लोटिंग PCL केसको कारण हो; हामीले समान .2२.२5 मल्टिप्लेयर प्रयोग गर्‍यौं। हामी प्लास्टिक I / O कफन मुनि RGB फेला पार्न सक्दैनौं, तर TUF ब्रान्डि the क्राउडमा प्रतिनिधित्व गर्दछ सबैलाई थाहा दिनुहोस् बोर्ड कहाँबाट आएको हो।
पोर्ट र स्लटहरू:
अन्य X570 मदरबोर्डहरू जस्तै, Asus TUF गेमि X X570 Plus WiFi दुबै Ryzen 2000 Ryzen 3000 श्रृंखला प्रोसेसर समर्थन गर्दछ; यसमा S SATA पोर्ट, D DIMM स्लटहरू १२8 जीबी सम्म DDR4 र्याम समर्थन गर्न सक्षम छन्। यद्यपि, उत्सुकतापूर्वक ओभरक्लोक्ड मेमोरी गति समर्थन उल्लेख गरिएको छैन।
PCI-e क्षेत्र दुई पूर्ण-लम्बाई स्लट र २ X1 स्लटहरू समावेश गर्दछ; X1 स्थानहरू X1 गतिमा चल्दछन्। यो यस प्रकारको बोर्डका लागि विशिष्ट कन्फिगरेसन हो, X 7070० चिपसेट। Asus AM4 TUF गेमि X X570-Plus WIFI एक धेरै सक्षम मदरबोर्ड हो जुन धेरै उचित मूल्यबाट सुरू हुन्छ।
G. गीगाबाइट X570 अरोस प्रो वाईफाई
गीगाबाइट एक्स 7070० अरोस प्रो वाईफाई एएमडी दोस्रो र तेस्रो जेनरेशन राइजेन सीपीयू समर्थन गर्दछ, र APU AM4 सकेट को उपयोग गर्दछ। गीगाबाइट एक्स A70० अरोस प्रो वाइफाइ १२ + २ चरणको साथ प्रस्तुत गरिएको छ। Power 48 पावर चरणहरू प्रयोग गरेर phase चरण दोहोरो पावर सेक्सनहरू CPU मा उपलब्ध AC ACA को लागी फिट हुनुपर्दछ। VRM लाई शक्ति खुवाउन यी आठवटा पिन ईपीएस कनेक्टरको साथ वैकल्पिक चार पिन यी भोका मल्टिकोर CPU हरूको लागि पर्याप्त शक्ति सुनिश्चित गर्दछ।
गिगाबाइट एक्स 7070० अरोस प्रो वाइफाइमा भएका चार मेमोरी स्लटहरूले डुअल च्यानलमा १२8 जीबीसम्मको डीडीआर memory मेमोरी समर्थन गर्‍यो र ओक्टा टिकाऊ मेमोरी आर्मरसँग सम्बोधन गरिएको थियो, जसले पीसीबी फ्लेक्सिंग बिरूद्ध सहयोग गर्न केही शक्ति प्रदान गर्दछ र ईएसडी हस्तक्षेप रोक्न मद्दत गर्दछ। मेमोरी गति र्याम आकार र Ryzen CPU, जो केवल 3000 श्रृंखला मात्र यस्तो उच्च दर समर्थन गर्दछ मा निर्भर गर्दछ।
X570 AORUS PRO WiFi सँग १ USB सम्भावनाहरू USB २.० देखि USB 3.0.० Gen २ सम्मका छन्। हामीसँग जम्मा USB USB २.० पोर्ट छन्, चार पछाडि र चार मदरबोर्डमा उपलब्ध छन्। PCI-e विस्तारको लागि, त्यहाँ तीन पूर्ण-लम्बाइ PCI-e X.० X16 स्लटहरू छन्, जस मध्ये शीर्ष एक X16 इलेक्ट्रिकली हो र ब्यान्डविथ साझा गर्दछ X8 र X8 कन्फिगरेसनको लागि दोस्रो स्लटसँग। यी दुबै स्लटहरूमा थप बलको लागि अक्टा टिकाऊ पीसीआई-ई आर्मर छ।
अन्तमा, एक्स 70 A० अरोस प्रो वाइफाइसँग केहि क्षेत्रहरू छन् जुन आरजीबी लाइटिंगद्वारा प्रज्ज्वलित हुन्छ, एउटा स्ट्रिप विशाल I / O कफनमा र अर्को अर्को अडियो बिभाजन पट्टीको साथ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं थप आरजीबी प्रकाश थप्न सक्नुहुनेछ। X570 AORUS PRO वाइफाइ लागत।
MS. MSI MAG X570 Tomahakk
एमएसआई म्याग एक्स 7070० टोमाहक एक उत्कृष्ट गुणस्तरको बोर्ड हो जहाँ यो प्रयोग गर्दछ छ ISL69247 कन्ट्रोलर छ V संकेत को VCM भाग को लागी VRM को लागी लिन्छ र ISL को 6617 चरण डबलरको प्रयोग गरी दोहोरो ती 12 चरणहरु त्यसपछि दर्जन ISL99360 को तारामा जडान हुन्छ। शक्ति चरणहरू। पूर्वनिर्धारितद्वारा, MSI दुबै पोर्टहरूको लागि 500KHz CPU स्विचिंग फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दछ र गणना गरिएको १.२ भोल्टमा निर्मित छ।
गेमि edge एज VRM ले wat 46 वाटको तातो राख्दछ, जसले PBO सक्षम भएको 170 5050०X पुल around 5050०X पुल दिएर यी पोर्टहरू यति तातो हुनुको कारण वर्णन गर्दछ। यसैबीच, एमएसआई म्याग एक्स ma5० टोमाहॉकले तापीय उत्पादनमा %०% घटाउँदा समान अवस्था अन्तर्गत १ wat वटा ताप उत्पादन गर्दछ। एमएसआई म्याग एक्स 70haw० टोमाहकले गेमि edge् धारको समान उस्तै heatsink डिजाइन फिचर गर्दछ, तर त्यो ठीक छ।
समग्रमा, MSI MAG X570 Tomahakk उत्कृष्ट देखिन्छ, र त्यहाँ कुनै बोर्ड छैन किन यो बोर्ड अहिलेसम्म उत्तम बजेट AM4 मदरबोर्ड हुनु हुँदैन। एमएसआई म्याग एक्स 70haw० टोमाहाक सबैभन्दा प्रभावशाली मदरबोर्ड हो जुन हामीले अन्य विद्यमान मोडेलहरूको तुलनामा टाढाबाट परीक्षण गरेका छौं। टोमाहाकले X570 गेमि pro प्रो कार्बन वाइफाइ जस्ता बोर्डहरू मेटाउँछ। यो हरेक प्यारामिटरमा उत्तम छ।
G. गिगाबाइट X570 अरोस एक्स्ट्रीम
यो मदरबोर्ड आफैंमा सम्पूर्ण आश्चर्यजनक छ। यो पूर्ण रूपमा आर्मर्ड ताप सिंक र तातो पाइपहरूमा कभर गरिएको छ; सायद यो एक मात्र कारण यो X570 मदरबोर्डमा कुनै चिपसेट फ्यान छैन। यो एक्लो एक राम्रो सुविधा हो किनकि प्रशंसकहरु ठूलो चर्को देखिन्छ। गीगाबाइट एक्स 70 A० अरोस एक्सट्रिममा दुबै प्रशंसक र आरजीबी हेडरहरूको लागि धेरै सम्पर्कहरू छन्। गीगाबाइटले सिमानामा कूल fan फ्यान हेड समावेश गर्दछ। शीर्ष दायाँमा, बोर्डले पावर अफ र रिसेटको लागि दुई ठूला बटनहरू पनि प्रस्ताव गर्दछ। यो सहयोगी हो यदि तपाईं यो टेस्ट बेन्चमा यो बोर्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
जस्तो कि यसको नामले स .्केत गर्दछ, यो बोर्ड चरममा जान सक्छ र ओभरक्लोकिंगका लागि सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा पहिला बनेको हुन्छ। यो मदरबोर्ड मात्र X570 मदरबोर्ड उपलब्ध छ जसले १ phase चरण VRM प्रयोग गर्दछ। अधिकांश अन्य प्रीमियम बोर्डहरूले १ claim चरणको पावर डेलिभरीको प्रयोग डबलर्सको प्रयोगद्वारा गरेको दावी गर्छन्। X570 चरममा वितरित गरिएको शक्ति वास्तवमै हामीले देखेको सब भन्दा राम्रो हो। गीगाबाइटले वास्तवमै एक राम्रो काम गरेको छ। BIOS Gigabyte समयसँगै परिवर्तन भएको छ र धेरै प्रयोगकर्ता-मैत्री भएको छ। यस मदरबोर्डको साथ प्रोसेसर ओभरक्लोकिंग धेरै सरल छ। कोरमा १.4 कल्टहरू प्रयोग गर्दा हामी यो बोर्ड over.3GHz लाई ओभरक्ल गर्न सक्षम भयौं।
यदि तपाईंसँग एक गहिरो पकेट र तपाईंको निर्माणको लागि एक्स्टेन्सिबल बजेट छ भने, तब हामी तपाईंलाई गीगाबाइट एक्स A A० अरोस एक्सट्रिमको अत्यधिक सिफारिश गर्दछौं।
यो तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुने उत्तम X570 मदरबोर्डमा हाम्रो व्यापक पोष्ट थियो। प्रत्येक मदरबोर्ड जुन हामीले माथि सूचीबद्ध गर्यौं केही उत्तम हो जुन हाल बजारमा अवस्थित छ। तपाईं यी मध्ये कुनै एकको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईंको निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको पीसी यसको अधिकतम क्षमता प्रदर्शन गर्नबाट फ्लिन्च पनि गर्ने छैन।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले यो पोष्ट सूचनामूलक पाउनुभयो र तपाईं छिट्टै आफ्नो खरीद गर्न लाग्नुहुनेछ। यदि हो भने, त्यसोभए कुन तपाईंको मदरबोर्ड ड्रप गर्नुहोस् जुन तपाईं तपाईंको निर्माणमा प्रयोग गर्नुहुनेछ, र यदि तपाईंसँग उत्तम X570 मदरबोर्डको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, यसलाई तल टिप्पणी बाकसमा छोड्नुहोस्।
गेमि forका लागि सर्वश्रेष्ठ Z390 मदरबोर्ड्स
सर्वश्रेष्ठ VPN सेवाहरू - सुरक्षित र सुरक्षित
पुटलोकर विकल्प (२०२०) - असीमित नि: शुल्क स्ट्रिमि।
Android को लागी नि: शुल्क अडियो प्लेयर
विश्वसनियका लागि रोबलोक्स संगीत कोड
महान भित्ता स्ट्रीमि put पुटलोकरहरू
डाउनलोड योग्य खेलहरू स्कूलमा अनब्लक
स्ट्रिम एचडी टिभी कार्यक्रमहरू नि: शुल्क